​मतदाता शिक्षा पुगेन गुल्मीमा, कर्मचारी राजनीतिक प्रचारमा खटिए कारवाही हुने
हुमाकान्त पोखरेल ४ मंसिर, गुल्मी । कालिगण्डकी गाउँपालिका ३ को जयखानी जिल्लाको पुर्वि विकट गाउँ हो । स्थानीय पूतिर्घाट बजारबाट धेरै माथि पहाडमा त्यो गाउँ छ । दुर्गम भएकाले सरकारका कार्यक्रम र कर्मचारी कम मात्रै पुग्छन् । त्यो मात्रै होइन, दलका चुनावी कार्यक्रम पनि अन्तिमतिर पुग्छन् । २६ कार्तिकबाट मतदाता शिक्षा शुरु भएको हो । तर त्यो गाउँमा अझैसम्म कोहि पुगेका छैनन् । ‘भोट हाल्ने…विस्तृत समाचार »
ओखलढुंगामा दशहजार ७०० मतदाताले पहिलो पटक भोट हाल्दै
२ मंसिर, ओखलढुङ्गा । चिसंखुगडी गाउँपालिका– ३ का रविना रोक्काले जीवनमा पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा मतदान गर्ने अवसर प्राप्त गरेका छन् । पहिलो चरणमा हुने लागेको यही मंसिर १० गते हुने निर्वाचनमा भोट हाल्न फोटोसहितको मतदाता नामावलीमा नयाँ नाम थपिएकी रोक्काले भने, “पहिलो पटक भोट हाल्न लागेको छु, भोट कसरी हाल्ने भनेर नमूना मतपत्र पनि हेरेको छु ।” रविनालाई अरुले लाइन बसेर भोट…विस्तृत समाचार »
२८ कात्तिक, भक्तपुर । आसन्न निर्वाचनमा भक्तपुर क्षेत्र नं १ मा नेपाल मजदुर किसान पार्टीको विरासत जोगाउने र भत्काउने दल बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । विसं २०४८ देखि लगातार निर्वाचन जित्दै आएका नेमकिपा अध्यक्ष बिजुक्छेले यसपटक नयाँ पुस्तालाई अघि सार्ने भन्दै पार्टी सचिव प्रेम सुवाललाई उठाएपछि यस क्षेत्रको प्रतिस्पर्धामा अन्य दल उत्साहित भएका हुन् । उक्त क्षेत्रमा बिजुक्छेको व्यक्तित्वका कारण नेमकिपाले चुनाव जित्दै आइरहेको…विस्तृत समाचार »
​चुनाव महंगो हँदै गएपछि निर्वाचन खर्च कम गराउने प्रयासमा उम्मेद्धारहरु
हुमाकान्त पोखरेल । २६ कार्तिक गुल्मी । चुनाव खर्चिलो बन्दै गएपछि गुल्मीका उम्मेदवारले निर्वाचनको प्रचार शैली फेर्न थालेका छन् । बामगठबन्धनबाट निर्वाचन क्षेत्र नं. २ को प्रदेशसभा २ मा उम्मेदवार बनेका माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार दिनेश पन्थीसंग प्रचारप्रसारमा दैनिक बढीमा ४ जना कार्यकर्ता हिड्छन् । उनी कार्यकर्तासँग एउटै जिपमा बस्छन् र दैनिक सँगै भेटघाटमा निस्कन्छन् । किसानको खेतबारीमै मत माग्दै पुग्छन् । जसले गर्दा उनलाई मतदातासँगको…विस्तृत समाचार »
अधिक चर्चामा काठमाडौं–१, कसले मार्ला बाजी ?
निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नं १ को चुनावी नतिजाबारे अनेक अड्कलबाजी सरु भएको छ । सो क्षेत्रमा प्रतिनिधिसभाका लागि नेपाली काँग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंह, वाम गठबन्धनबाट अनिलकुमार शर्मा, विवेकशील साझा पार्टीबाट रवीन्द्र मिश्र, नेपाली काँग्रेस (बिपी) बाट हरिबोल भट्टराई, नयाँ शक्ति पार्टीबाट नारायण ढकाललगायत २२ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । यस क्षेत्रमा काठमाडौं महानगरपालिकाको १०, ११, २९ र ३१ नं वडामा रहेका पुरानो…विस्तृत समाचार »
पृथ्वीराजमार्ग क्षेत्रमा प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको चहलपहल बढ्दै गएको छ । यहाँका मतदाता मंसिर १० गते मतदान गर्ने दिन पर्खेर बसेका छन् । यहाँ वाम गठबन्धन र नेपाली काँग्रेसबीच मुख्य प्रतिष्पर्धा हुने देखिन्छ । दुवै दलका कार्यकर्ता हरेक दिन नाचगान गर्दै मत मागिरहेका छन् । राजमार्ग आसपास भोट माग्नेको लर्कन देखिइरहन्छ । तर, सडकमाथि रहेको चेपाङ बस्ती भने सुनसान छ । स्थानीय तह…विस्तृत समाचार »
कालिगण्डकीको पानी तानसेन ल्याउने वाम गठबन्धनको बाचा
२२ कार्तिक, पाल्पा । पाल्पामा वामगठवन्धनका उम्मेदवारहरुले जिल्लाको विकास निर्माणको लागी आफुहरुलाई मत आग्रह गरेका छन् । वाम उम्मेदवार परिचयात्मक कार्यक्रममा नेताहरुले पाल्पाको विकास निर्माणमा जोड दिएका हुन । गठवन्धनका उम्मेदवारहरुले जनताका आधारभुत आवश्यकता शिक्षा, स्वास्थ्य सडक, खानेपानीको क्षेत्रमा विशेष काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन । प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नं. १ का उम्मेदवार दलबहादुर रानाले जिल्लाको सडक सुरक्षित र सुविधायुक्त बनाउने बताए । रानाले जिल्लामा…विस्तृत समाचार »
१९ कार्तिक, महोत्तरी । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका संयोजक महन्थ ठाकुरले ‘जन्मभूमिले बोलाएपछि’ यस पालि महोत्तरी जिल्लामा चुनाव लड्न आएको बताएका छन् । आउँदो मंसिर २१ गते हुने दोस्रो चरणको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा महोत्तरी जिल्लाको क्षेत्र नं ३ बाट प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका उम्मेदवार ठाकुरले सदरमुकाम जलेश्वरमा आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै मतदाताको विशेष आग्रहमा आफू महोत्तरीबाट चुनाव लड्न आएको बताए । जिल्लाको साविक एकरहिया…विस्तृत समाचार »
​मोरङमा छ लाखभन्दा बढी मतदाता
१९ कात्तिक, मोरङ । एक महानगरपालिका, आठ नगरपालिका र आठ गाउँपालिका गरी मोरङ जिल्लामा ६ लाख ४४ हजार ७८२ मतदाता छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि निर्वाचन आयोगको कार्यालयले मतदाता नामावली संकलनमा ७० हजार २८२ मतदाता थपेपछि मतदाताको सो संख्या पुगेको हो । छ वटा संसदीय क्षेत्र भएको मोरङमा सबैभन्दा बढी क्षेत्र नं ३ मा एक लाख २७ हजार ४९५ मतदाता छन् । सोमध्ये ६० हजार…विस्तृत समाचार »
​निर्वाचनका लागि दाङमा एमाले–माओवादी गठबन्धनले उम्मेदवार टुंग्याए
१४ कार्तिक २०७४
१४ कात्तिक, दाङ । आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि दाङमा एमाले माओवादी गठबन्धनले उम्मेदवार टुङ्ग्याएको छ । एमालेका अध्यक्ष टीकाराम खड्काका अनुसार दाङमा रहेका तीन क्षेत्रमध्ये दुई क्षेत्र एमालेलाई र एक क्षेत्र माओवादीलाई दिइएको छ । प्रदेशसहित एमालेले छ र माओवादीले तीन क्षेत्र पाएका छन् । एमालेले प्रतिनिधिसभाका लागि २ र प्रदेशसभाका लागि चार क्षेत्र पाएको छ । यस्तै माओवादीले प्रतिनिधिसभाका लागि १ र…विस्तृत समाचार »